लकडाउनमा बसेकालाई तरकारी खुवाउन ओमप्रकाश बारीमै व्यस्त
उपभाेक्ता समाज समाचार
शेर भण्डारी डडेल्धुरा, ८ वैशाख
चैत्र ११ गतेदेखि सरकारले सिंगो देश ‘लकडाउन’ गरेको छ । व्यापार व्यवसाय, शाखा सडकदेखि राजमार्ग सुनसान छन् । कोलाहलपूर्ण सहर/बजार सुनसान जस्तै छ । सरकारले सबै नागरिकलाई घर भित्रै बसेर ‘लकडाउन’को पूर्णरूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर, ग्रामीण समुदायका किसानलाई भने ‘लकडाउन’ले भने छोएको छैन् । ‘लकडाउन’को समयमा शहर बजारका मानिसहरू दिन काट्न दिक्क मानिरहेको समयमा ग्रामीण भेगका किसान भने दिनभर खेतबारीमै रमाइरहेका छन् ।
बारीमा उत्पादन गरेका तरकारीलगायतका अन्नबालीसँगै दैनिकी बिताइरहेका छन् । जिल्ला सदरमुकामहरुमा कोरोनाको सन्त्रास छाइरहेका बेला किसानहरुलाई भने कोरोनाको प्रवाह नै छैन् ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–४ कटालका ओमप्रकाश जोशीको दैनिकी अहिले तरकारी बारीमै बित्ने गरेको छ । आधुनिक तरिकाले एक बिघा जमिनमा लगाएको तरकारी खेती गोडमेल र सिँचाइ गरिरहेका छन् । टमाटर, काक्रा, बन्दा, फर्सी, सिम्ला मिर्च, बैगन, खुसार्नी, धनियाँ, लसुनलगाएतका तरकारी बारीमा फलाइरहेका छन् ।
गतवर्ष उनले ‘मल्चिङ विधि’ प्रयोग गरेर उनले डेढ बिघा जमिनमा आलु खेती गरेका थिए । आलु फलाएर १ लाख ६० हजारको बिक्रीसमेत गरे । अहिले उनले खेतमा टमाटर लगाएका छन् । करिब १५० बोट रोपेको उनी बताउँछन् ।
ओमप्रकाशले भने, ‘लकडाउन छ भनेर के गर्ने ? लगाएको उत्पादनको ख्याल गर्नुपर्‍यो ? उत्पादन बढाउने गरी दैनिक खेतबारीमै दिन कटाउने गरेको छु ।’
बजारमा उत्पादन पुर्‍याउन नपाउँदा घाटा हुने डर पनि रहेको उनले सुनाए । ‘माघको अन्तिम तिर टमाटर रोपेको हुँ । एक बोटमा २५ देखि ३० किलो टमाटर फलाउने लक्ष्य रहेको छ’ उनले भने ।
‘लकडाउन’ले फाइदा : तरकारी बारीमै बिक्री
अहिले धेरै ठाउँमा ‘लकडाउन’का कारण लगाएको तरकारी बाली बिक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, जोशीले भने यो समस्या झेल्नु परेको छैन् ।
अहिले ‘लकडाउन’का कारण तराई तथा भारतीय बजारबाट तरकारी आउने क्रम रोकिएको छ । जसको प्रत्यक्ष फाइदा जोशीले लिइरहेका छन्। अहीले उनले लगाएको तरकारी बारीमै बिक्री भइरहेको छ ।
‘लकडाउनले मलाई त्यति समस्या भएको छैन् । स्थानीयले बारीबाटै तरकारी लैजान्छन् । बारीमै तरकारी बिक्री हुन्छ’ उनले भने, ‘भारतीय विषादी प्रयोग भएको तरकारीभन्दा पनि गाउँ ठाउँमै उत्पादन भएको आर्गनिक तरकारी खाँदा स्थानीय हर्षित छन्।’
विदेशमा सिकेको सीप आफ्नै ठाउँमा प्रयोग
साना किसान बैंकबाट उनी १ वर्षअघि इजरायल गएका थिए । करिब १ वर्षजति उनी त्यहाँ रहे । त्यहाँ रहँदा उनले कृषिसम्बन्धी थुप्रै सीप हासिल गरे ।
विदेशमा सिकेको सीप अहिले उनी स्वदेशमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यहाँ सीप हासिल गरेपछि उनलाई आफूले सिकेको सीप स्वदेशमै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
यही हेतुले उनी २०७६ भदौ ९ गते नेपाल फर्किए । र, जमिन भाडामा लिएर व्यवसायिक कृषि खेतीमा लागेका छन् । आफ्ना छरछिमेकी र स्थानीय बासिन्दालाई समेत अहिले ओमप्रकाशले आधुनिक कृषि कसरी गर्ने भनेर सिकाइरहेका छन् ।
विगतमा परम्परागत कृषि गर्ने यहाँका किसान अहिले ओमप्रकाशले आधुनिक प्रविधिबाट खेती गर्न सिकाएपछि आधुनिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
‘हामी नेपाली भन्दा इजरायली जनता धेरै मेहेनेती छन् । त्यहाँ ५ प्रतिशत जनताले मात्रै कृषि गर्छन् । तर, उनिहरुले नै अर्थतन्त्र धानिरहेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘आधुनिक तरिकाले कृषि खेती गर्ने हो भने, नेपालमा पनि किसानहरुले अर्थतन्त्र धान्न सक्छन् ।’
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारणले अहिले सिंगो देश लकडाउन छ । लकडाउनका कारण अहिले उनलाई परिवारको साथ मिलिरहेको छ । उनी दैनिक ५ घण्टा खेतमा काम गर्छन्।
विशेष गरेर साँझ बिहान परिवारको साथ मिल्ने गरेको उनी बताउँछन् । बुवा साँझ बिहान पसलमा गए पनि दिउँसोतिर सहयोग गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले लकडाउनका कारण परिवारको साथ सहयोग अरू समयभन्दा बढी पाएको छु । विशेष गरेर बुबाले सहयोग गर्नु हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अरू परिवारका सदस्यहरू अन्य काममा व्यस्त हुन्छन् । तर, आपत विपतमा सहयोग गरिरहन्छन् ।’
वार्षिक तीन लाख कमाइ
एक लाख ६० हजारको आलु बिक्री उनले यसअघि नै गरिसकेका छन्। घर खर्च खटाएर बार्षिक तीन लाख कमाइ हुने गरेको उनि बताउँछन्।
यसै पेसालाई निरन्तरता दिन्छु
यसै पेसालाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । अरू व्यापार व्यवसायभन्दा आफू यस पेसामा सन्तुष्ट रहेको उनी बताउँछन् ।
कुन समयमा कुन तरकारी लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अहिले परीक्षण गरिरहेको र आगामी दिनमा अझै यो खेतीलाई विस्तार गर्ने उनको योजना छ ।
अहिले उनले टमाटर, धनियाँलगायतका अन्य तरकारी बाली लगाएर परीक्षण गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा जुन तरकारी लगाउँदा बढी फाइदा हुन्छ त्यसैलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ८, २०७७, १३:१७:००
सुदूरपश्चिममा मंगलबार थपिए ९६ कोरोना संक्रमित
सुदूरपश्चिममा थप २२८ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या २ हजार नाघ्यो
बैतडीमा क्वारेन्टाइनका भान्सेको मृत्यु, कोरोना परीक्षण हुँदै